HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulFgbọ elu ụgbọ elu abawanye na Istanbul
Fgbọ elu ụgbọ elu abawanye na Istanbul
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey 0
abawanye na obodo metro dị na istanbul
Fgbọ elu ụgbọ elu abawanye na Istanbul. Site na nkwupụta sitere na Metro Istanbul, M6 Levent-Boğaziçi University / Hisarüstü metro line emewo ka ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu dị elu.
N'ide ederede edepụtara, e nyere nkwupụta ndị a: “M6 ụgbọ elu nke Mahadum Levent-Boğaziçi / Hisar ,stü, nke a na-eme na nkeji nkeji oge 9 ụbọchị niile, na-ahazigharị site na ịtụle ihe ndị chọrọ njem anyị.
N'ime nhazi nke ọnọdụ nke usoro anụ ahụ nke sistemụ ahụ nyere, a malitere ịrụ ọrụ ahụ otu oge n'etiti 07: 00-10: 00 na 16: 00: 20: 00: 5: XNUMX awa n'ụtụtụ.
Izmir, Winter Timetable, Bus na Metro Expeditions Mụbara 19 / 09 / 2016 Izmir, Winter Schedules, Bus and Metro Expeditions Mụbara: Obodo Izmir Obodo Ukwu ESHOT General Directorate na Izmir Metro Inc., na mmalite nke ụlọ akwụkwọ 19 September site na Monday ruo oge oyi bụ mmejuputa nke ngwa ahụ. Ugbo na oge metro na-etowanye ugboro. Onye isi oche nke ESHOT na İzmir Metro A.Ş., 19, weghachitere usoro ihe omume ahụ na September, na-echebara ike ụlọ akwụkwọ na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. E tinye bọs 1286 na bọs 186 dị ugbu a ma mụbaa bọs ndị ahụ na 1472. Ndị isi n'ozuzu nke ndị ọrụ ESHOT nọ n'ụbọchị izu ụka ahụ, na 15 ọhụrụ bellows bus ES
Ọnọdụ okpomọkụ na-arịwanye elu na ụzọ ụgbọ oloko na-ekesa ndị mmiri mmiri 09 / 08 / 2016 A kesaara ndị njem na onodu mmiri ụgbọ mmiri: na Moscow "Timiryazevskaya", "Otradnoye", "Kuzminki", "Ryazanski Prospekt" na "Prajskaya" ọdụ ụgbọ elu na-ekesa ndị njem mgbe ikuku nke elu na-ada n'elu nkịtị. Na nkwupụta sitere na Moscow Metro, "mita Timryazevskaya" nke mita 28,2, "Otradnoye" ogo 28,4, "Kuzminki" mita 28, "Ryazanski Prospekt" ogo 28,2 na "prajskaya" kwuru. Dị ka okwu ndị isi Metro si kwuo "Altufyevo" na ụlọ ọrụ Metro 28,2 na-ekesa mmiri mmiri mmiri na otu puku iberibe mmiri mmiri na-ehichapụ. Na mbụ, ụgbọ okporo ígwè ndị dị na Moscow amalitela ọchịchị mberede n'ihi ọnọdụ ihu igwe na-ekpo ọkụ.
Ọrụ ụgbọ okporo ígwè Denizli-Izmir mụbara 14 / 07 / 2012 Ọrụ ụgbọ okporo ígwè Denizli-Izmir na-abawanye: TCDD, Denizli-Izmir n'etiti oge ọnụ ọgụgụ nke ugboro atọ n'ụbọchị, ọnụ ọgụgụ ụgbọ oloko a mụbara na-achọ ndị njem. 3 okporo ụzọ okporo ụzọ. Dika nkwuputa nke Executive Directorate, 6 si Denizli si Denizli, 5 nke Denizli ka Izmir ga-ahazi kwa ubochi. N'aka nke ọzọ n'etiti njem Sohan-Denizli na njem 2 n'etiti ụbọchị, Denizli-Nazilli n'etiti otu ụbọchị ga-eme. Na nkwupụta ahụ, ọnụọgụ njem ndị njem na-arịwanye elu na-achọ n'aka ndị njem ma ụgbọ njem Anatolia ga-eji ụgbọ njem mee njem. Ụgbọ elu ọhụrụ na-eje ozi taa (14.07.2012).
SAMULAŞ Na-amụba Ọganihu Maka Ales Exam 09 / 05 / 2015 Ha mkpọsa Dịkwuo SAMULAŞ Ales Exam: SAMULAŞ Inc. na ìhè okporo ígwè ugbo ala na awara awara ụgbọ ala ya na-arụ ọrụ Ọmụmụ ga-enwe 10 Sunday, May Personnel na Postgraduate Education Ụzọ mbata udomo (ALES) n'ihi na ọbụna dị Aims ka anọgide na-enweghị emeghasịkwa nke ọha iga ọrụ na-aga ịmụba ọnụ ọgụgụ nke dị ugbo ala. Dị ka nkwupụta ahụ sitere na SAMULAŞ si kwuo, a kọwara 10 na ọnụ ọgụgụ nke ụgbọala ndị ụgbọ okporo ígwè dị ọkụ si 14 ruo 16 na ọnụ ọgụgụ ụgbọala ụgbọ ala kwupụtara ụgbọ ala sitere na 5 ruo 6 na May Sunday.
Oge ụgbọ na Konya agbanweela! Ọrụ mgbasa ozi abawanye 12 / 06 / 2017 Oge ụgbọ na Konya agbanweela! Trams oge ụba Konya Metropolitan Municipality, abalị ụgbọ ala tram ụzọ hazie oge awa ka a mara ọkwa na ose na-mere. Konya Metropolitan Municipality nkwupụta si Transportation Planning na Okporo ígwè Systems Department kwuru: "12 awa na-kwughachiri si oge na niile ụgbọ ala edoghi na Monday, June. A na-ekwuputa usoro ọhụụ ọhụrụ site na ọnụahịa tarifụ na adreesị weebụ www.konya.bel.tr. Ọzọ, 12 June si Monday Seljuk District of Bosnia and Herzegovina, Kosovo na Sandzak n'agbata obi a irè karị na oru oma iga ọrụ na ebumnuche 58 akara Mba enweta 'Bosnia and Herzegovina Tramway Drive Line' si ụgbọ ala ụzọ ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 October Ọkwọ ụgbọala mbụ n'ime Eurasia Tunnel ras
MESİAD: 'Ekwesịrị Systemrụ Kọlọ Light Light Kama nke Metro ruo Mersin'
Ihe Ego EKOL's Modelial Transportation Na-enweta Onyinye Nkwado
Ngwa ndebanye ikpeazụ maka ụlọ ọrụ moto ọhụrụ bidoro
Izmir, Winter Timetable, Bus na Metro Expeditions Mụbara
Ọnọdụ okpomọkụ na-arịwanye elu na ụzọ ụgbọ oloko na-ekesa ndị mmiri mmiri
Ọrụ ụgbọ okporo ígwè Denizli-Izmir mụbara
SAMULAŞ Na-amụba Ọganihu Maka Ales Exam
Oge ụgbọ na Konya agbanweela! Ọrụ mgbasa ozi abawanye
Adabazarı Na-azụ ụgbọ elu kwesịrị ịba ụba
Mgbatị ụgbọelu Metro na-agbatị na Istanbul
Mgbanwe Metro Transition Bridge na-eme ka ọnụahịa ụlọ
Ọdụ ụgbọ mmiri na mpaghara ụlọ ọrụ na-amụba ọnụ ahịa ụlọ
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (427) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)